Nepal Deep | पालैपालो दरबार र सेनासँग निहूँ खोज्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बने भूमिकाविहिन
पालैपालो दरबार र सेनासँग निहूँ खोज्दा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बने भूमिकाविहिन
बिहिबार, असोज २९ २०७७
काठमाडौँ। केहि समयका लागि एकदमै प्रभावशाली मन्त्रीका रुपमा देखिएका ईश्वर पोखरेल एकाएक शक्तिहिन जस्ता भएका छन्। शक्तिशाली मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुगिसकेका पोखरेल भर्खरको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा भूमिकाविहिन अवस्थामा पुर्याईएका हुन्। उनी रक्षा मन्त्रालयबाट खुम्चिएर बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएका हुन्।
सिंहको जस्तो गर्जन गरिरहेका पोखरेल ओराली लागेको मृग जस्तो भएको देखेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनि हसीमजाकको पात्र बनिरहेका छन्। कोहिले पोखरेलको मन्त्रीमण्डलमा अहिलेको स्थितिलाई प्रधानमन्त्रीको ‘कार्यालय सहयोगी’ जस्तो भनेका छन्। एक अनलाइनले त ‘उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको झण्डा र डण्डामात्रै बाँकी’ भन्ने हेडलाइनमा समाचार नै लेख्न भ्याएछ।
तर प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई भने पोखरेल शक्तिहिन भएको मान्न तयार छैनन्। भट्टराई भने पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पहिलेभन्दा झन् महत्त्वपूर्ण भूमिका दिइएको बताउँछन्। ’प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पाँचवटा महत्त्वपूूूर्ण विभाग छन्। पाँच जना त सचिवै छन् त्यहाँ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसैले ती सबैलाई हेर्नेगरी उहाँ (पोखरेल)को जिम्मेवारी थपिएको हो।’
भट्टराईले बचाऊ गरेपनि यथार्थमा त्यसो होइन। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले पोखरेल आराजक बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कारवाही गरेको दाबी गर्छ।
आखिर शक्तिशाली मानिएको ईश्वर पोखरेल किन यो स्थितिमा पुगे त? उनको शक्ति क्षीण हुदा अर्का उनका कट्टर प्रतिस्पर्धी जग्गा काण्डका मतियार विष्णु पौडेललाई किन शक्तिशाली मन्त्रालय पुरस्कार दिइयो होला त?
वास्तवमा कम्युनिष्ट राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिरहेका जो कोहिलाई थाहा छ, नेकपाभित्रका शक्तिका भोकाहरु हुन् ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल भन्ने। अनि एकआपसका प्रतिस्पर्धी पनि। पाेखरेललाई छायाँमा पार्दै पाैडेललाई एकाएक नेकपा महासचिव बनाइएपछि उनी क्रुद्ध थिए। पौडेललाई एकीकृत पार्टीको शक्तिशाली महासचिवका रूपमा जिम्मेवारी दिइँदै गर्दा पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्‌मा तुलनात्मक रूपमा कम महत्त्वको मानिएको रक्षा मन्त्रालयमा खुम्च्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
तर मन्त्रीपद नै छोड्ने कुरा त भएन। त्यसैले सेट भइहाले रक्षा मन्त्रालयमा पाँच वर्षका लागि। बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पनि देखिए। जे होस् राम्ररी नै बित्दै थियो पोखरेलको कार्यकाल। तर पोखरेलले सोचेकासम्म पनि थिएनन् होला त्यहि बल्लबल्ल पाएको मन्त्रालय पनि आधा बाटोमै फुस्किन्छ भन्ने।
शक्तिको मात न हो। पछिल्ला दिनहरुमा मानिसहरुले पोखरेलमा त्यहि मात बढेको अनुभव गरिरहेका थिए। त्यसैले पनि ढिलोचाडो पोखिनु पर्ने थियो नै। हुन पनि त्यहि भयो, दुई कुराले पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट हटाइए। अरिङ्गालको गोलोमा लगेर हात नै हालेपछि त ‘रामराम’ निश्चित छ। त्यस्तै भयो। दरबार र सेना चलाउदा पोखरेल आज बिना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सिमित हुन पुगे।
एमाले छँदा आफ्ना अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘मेल/विमेल’ को सम्बन्ध बनाएका पोखरेल पछिल्लो समय न्यानाेपन फर्काउन ब्यग्र थिए । त्यसका लागि उनी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बढ्तै प्रहार गर्ने, अनि ओलीको नजिक देखिने प्रयासमा लागे । उनले माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि प्रहार गर्न छाडेका थिएनन् । जे-जे गर्दा ओली खुसी हुन्छन्, त्यही-त्यही गर्नेमा उनी थिए ।
ओलीनजिक देखिनका लागि उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध तिखा अभिव्यक्ति पनि दिने गरे। उनले आफू जनताको बहुदलीय जनवाद नै ब्युँताउनुपर्छ भन्नेमा रहेको पनि जिकिर गर्थे । यस कारण पोखरेलसँग प्रचण्ड रुष्ट थिए।
‘लकिरका फकिर’ काण्ड
पछिल्लो समय सेनाको कार्यशैलीलाई लिएर रक्षा मन्त्रालयमा पोखरेलले दिएको अभिव्यक्तिप्रति जंगी अड्डा असन्तुष्ट थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको विषय र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा रक्षामन्त्री पोखरेलका कारणले सेना अपमानित र अनावश्यक टिप्पणी सुन्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार थापाले ‘अब मिलेर काम गर्ने स्थिती छैन कि मैले छोड्नुपर्यो कि रक्षामन्त्रीले छोड्नुपर्यो’ भन्दै त्यो स्थिती सिर्जना नभए सेना आफैले कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले थापालाई सम्झाए भनिन्छ।
सेनापतिकै अघिल्तिर पाेखरेलले बाेलेका केही शब्दलाई लिएर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बिच्किएका थिए। पोखरेलले एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौं तराई जोड्ने फाष्ट ट्रयाक निर्माण ढिलाइ भएकोमा अगाडि रहेका प्रधान सेनापतिलाई संकेत गर्दै उपदेश दिएको शैलीमा ‘लकिरका फकिर’ हुनुभएन भन्दै व्यङ्ग्य गरेपछि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका नेतृत्वबीच दुरी बढेको स्पष्ट भएको थियो।
थापाले लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर पाेखरेलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त पनि गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानसेनापती गर्जिए, भने- ‘कि मैले छोड्नुपर्यो कि रक्षामन्त्रीले’
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गठन गरिएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को समन्वय प्रभावकारी नभएको अपजस पोखरेलमाथि छँदै थियो । मेडिकल सामग्री किन्ने क्रममा सेना नचाहिँदो विवादमा तानिएको भन्दै पोखरेलसँग जंगी अड्डा क्रुद्ध पनि थियो ।
सेना र रक्षमन्त्रीबीचको असमझदारी यतिसम्म बढेको थियो कि सैनिक मुख्यालयका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु रक्षा मन्त्रालयमा अड्काइएका थिए। सेनाको नेतृत्वसँग शक्तिसंघर्ष भएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘व्याक’ गराएका थिए। सेनासँग पोख्रेलको आमनेसामने भएपछि सामाजिक संजालमा एकाएक उनले मच्चाएको पुरानो काण्ड- ‘पानी ट्यांकीमा पैसा लुकाएको’ कुरा छ्यापछ्याप्ती भयो।
त्यसैबीच देशको एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा अत्यन्तै विवादित छवी भएका प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला नियुक्त भएका थिए। उनि पोख्रेलका सम्धी हुन्। सरकारी नियुक्तीमा नातावादलाई प्रोत्साहन दिने गरि आफ्नै सम्धीलाई नियुक्त गर्न लगाएको भन्दै सामाजिक संजालमा पोख्रेलको निक्कै आलोचना भएको थियो।
उतिबेला बाध्यतावश पछाडी फर्किनु परेको उनलाई रिस नमरेको हुन सक्छ। त्यति बेला केहि बोल्न नपाएका पोखरेलले सम्धी नियुक्ती प्रकरणबारे स्पष्टिकरण दिदैं गर्दा त्यस प्रसंगलाई पनि उप्काए। आलोचना चुलिएसंगै पोखरेलले विज्ञप्ती नै निकालेर फेरी सेनातर्फ प्रहार गरे। उनले नेपाली सेनातर्फ इंगित गर्दै, ‘घरको पानी ट्यांकीमा पैसा राखेको’ भन्ने कू प्रचार गर्ने ‘विगतको निरंकुश शाही शासनकालका तिनै दुष्ट मतियारहरू’ले नै अहिले बदनाम गर्न खोजेको बताए।
रक्षामन्त्रीले सेनातर्फ इंगित गर्दै भने, ‘शाही शासनका दुष्टहरूले’ म विरुद्द ‘कू’ प्रचार गरे
यो काण्डले प्रधानमन्त्रीलाई पोखरेललाई मन्त्रीमण्डलबाटै हटाउन प्रेसर परेको थियो। तर प्रधानमन्त्री भने पोखरेल जत्तिको निकट व्यक्तिलाई नहटाउने सोचमा थिए त्यति बेला सम्म। तर त्यसपछि पनि पोखरेलले पाठ सिकेनन्। रन्थनिएका पोखरेलले फेरी सेना जस्तै अर्को सँस्थामा हात हाले। उनले राजदरबारलाई नै साइजमा ल्याँउछु भनेर लागेपछि भने उनलाई भूमिकाविहिन बनाउने निर्णयमा ओली पुगे। स्रोतका अनुसार दरबार र सेना पालैपालो चलाउदा देशमा अर्को सम्मिकरण बन्ने आङ्कलनसहित प्रधानमन्त्रीले पोखरेललाई ‘ब्याक’ गराएका हुन्।
‘नेपाल ट्रस्ट’ जग्गा प्रकरण
शक्तिहिन देखिए जसरी नेपथ्यमा मौन बसिरहेको दरबारलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले चलाउन खोजे। पोखरेलले तत्कालिन श्री ५ महाराज ज्ञानेन्द्र शाहकि छोरी राजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई बस्दै आएको घरबाट बलपूर्वक निकाल्न मातहतका कर्मचारीलाई आदेश दिए।
नेपाल ट्रस्ट सूत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार प्रेरणालाई घरबाट एक्काइस दिनभित्र निस्कन आदेश दिइएको पत्र असोज ५ गते बुझाइएको छ। र, यो अवधिभित्र घर नछोडे बलपूर्वक घरबाट निकाल्न मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिए। यही असोज २६ गते पत्र बुझाएको एक्काइस दिन पूरा भएपछि प्रहरी लगाएर प्रेरणालाई घरबाट निकाल्ने तयारी गर्न पोखरेलले आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। तर निर्णयको कार्यनव्यन गर्ने ऐनमौकामा नै पोखरेल पदच्यूत भएका छन्।
आफ्ना पिताबाट दाइजोमा प्राप्त हुन आएको छाउनीस्थित घर (विजया बास)मा प्रेरणा आफ्ना पतिका साथ विगत दुई दशकदेखि बस्दै आएकी थिइन। नेपाल सरकारले विजयाबास समेतलाई नेपालट्रस्ट मातहत ल्याएको थियो। लामो समयको मुद्धामामिलापछि पनि नेपाल ट्रस्टको नै पक्षमा फैसला आएपछि प्रेरणा नयाँ घर बनाएर सर्न लागेकी थिइन। उनको घर निर्माणको चरणमै रहेको छ। कोरोनाका संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लागु गरेको लकडाउनले निर्माण कार्य रोकिएको थियो।
त्यसपश्चात प्रेरणाले घरको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेवित्तिकै आफूले विजया बास छोड्ने जानकारी गराउँदै बढीमा एक वर्ष उक्त घरमा बसोबास गरी पाउन नेपाल ट्रष्टमा मागसहित निवेदन दिइन। तर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल राजकुमारी प्रेरणाको निवेदनप्रति सकारात्मक भएनन्। बरु बलपूर्वक घरबाट निकाल्ने आदेश नेपालट्रस्टका कर्मचारीलाई दिए।
प्रदेश राजधानीसँग अर्थमन्त्रालय सटही
उता, पोखरेलका प्रतिष्पर्धी विष्णु पौडेल भने यसैबेला शक्तिशाली मन्त्रीपदबाट पुरस्कृत भएका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि पूरै रक्षात्मक देखिएका पौडेल कसरी एकाएक शक्तिशाली मन्त्रीका रूपमा उदाउन पुगे त ?
पहिलाे, लुम्बिनी विवादकाे साम्य पार्न पौडेलले खेलेको भूमिका। पहिला अस्थायी मुकाम तोक्ने बेलामा पौडेलको जोडबलमा बुटवलमा राखिएको थियो। अहिले प्रदेश राजधानी तोक्ने काममा ढिलाई हुनुको पछाडी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र पौडेल आफ्नो आफ्नै अडानबाट टसमस नहुनु नै रहेको थियो। यद्दपी प्रदेश राजधानी स्थाई रुपमा बुटवल नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृण रहेका पौडेलले एकाएक दाङ बनाउने कुरामा ग्रिन सिग्नल दिएका थिए। स्रोतका अनुसार पौडेलको समर्थनमा प्रदेश राजधानी दाङ तोकिएको हो।
स्रोतको अनुसार बुटवलमै राजधानी राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइदिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले गरेसंगै उनि पछि हटेको थिए। पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने र प्रदेश ५को राजधानी दाङ बनाउने प्रपञ्च अन्तर्गत नै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको बहिर्गमन भएको थियो भन्ने अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ।
दाेस्राे, उनी प्रचण्डसँग पनि सहज छन् । माधव नेपालले पनि उनलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन ।
प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफ्नोमातहत राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीका कार्यालयमा खुम्च्याउने र उनका प्रतिस्पर्धी पौडललाई अर्थमन्त्री बनाउनुलाई नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ।
पौडेल अर्थ मन्त्रालयको बदलामा प्रदेश राजधानी दाङमा सार्न सहमत
बन्दसत्रमा ‘केपी ओली आइ लभ यु’को नारा, ‘पार्टी फुटाउने मतियार’ भन्दै रावलको आलोचना
ओलीलाई सर्वाधिकार: वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर र महासचिवमा शंकरको सम्भावना !
केन्द्रिय समिति घोषणा गर्ने ओलीको अन्तिम तयारी, बन्दसत्र सुरु
ओलीले केन्द्रिय कमिटी घोषणा गर्न लागेपछि रावलले भने: अलोकतान्त्रिक कार्य, धाँधलीको संकेत
आजै ओलीले घोषणा गर्ने कमिटी ताली पड्काएर अनुमोदन गरिँदै, रावल र भुसाललाई ‘बाइपास’ !
सुमार्गीको टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
हप्ताको पहिलो दिन नै ८० अङ्कले घट्यो नेप्से
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य,तोलाको कति पुग्यो ?
१ लाख ९४ हजार डलरसहित एक जना प्रहरी नियन्त्रणमा
आज नेप्से सामान्य घट्यो
आज पनि सुनको भाउ घट्यो,तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार
गरिमा बैंक १५ औं वर्षमा प्रवेश: २१ शाखामा रक्तदान, ५ शाखा कार्यालयहरुको कारोबार शुभारम्भ
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट : अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक
नेपाली महिला टिम टी–२० विश्व कप : युएइसँग नेपाल पराजित
ट्राफिक प्रहरीद्धारा उपत्यकाबाट हराएका २३ मोटरसाइकल फेला
कोरोना अपडेट : थप १५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २ जनाको मृत्यु
प्रताप र रचनाको स्वरमा रहेको नयाँ गीत सार्वजनिक